Pleasure ingeyomzimba - a nightgown yesimanje
Ngesizathu esithile, izintokazi eziningi ibinzana nightdress lihlotshaniswa into ecishe ifane, ugly, ukhululekile kakhulu futhi zisebenza kahle, kodwa hhayi senzelwe prying amehlo. Kodwa kuthiwani uma zama ukubona ngamehlo engqondo lokhu ingxenye ikhabethe nenhle eyayifakwe neckline yiziphazamiso ezihehayo futhi kuze kudabuke umhlane ezithambile .... Impression ngokushesha washintsha, kangangokuthi version elidala ngisho ukucabanga awufuni.
Zabesifazane ebusuku amahembe zabesifazane, ngomusa nenhle, akunjalo ngaso sonke isikhathi. emakhulwini amaningi eminyaka edlule, lezi zinto kancane impela ngakho: Yebo, abesifazane abavela emindenini ecebile, ngisho Ephakathi ayenamandla okukwenza undershirt wenza nomzimba omncane impahla ezibizayo (isib utshani), kodwa ukubukeka kwayo kuhlukile kunokunikeza uhlobo indawo ongumlimi amahembe. nightgowns usadlondlobele njengengxenye enhle esikisela ucansi wezigqoko weza kuphela lapho ubulili fair is fully aware of ngokwabo, ubulili babo isikhalazo kanye ilungelo lenkululeko.
Ngokuhamba kwesikhathi, nje kwenzeka - fashion yesimanje akulungele ukuhamba ngenxa ucwaningo kwakwakhiwa kakhulu futhi Amazing, ngakho nightgowns yabesifazane - futhi njengabesifazane - kuleli khulu leminyaka kukhona engavamile futhi ngempela kufanele kungenziwa ngokuthi imisebenzi yobuciko. Ukuze yokukhiqiza yabo materials abachwepheshile: kasilika mncane lace emihle, elithambile satin kudabuke kanye rhinestones elikhazimulayo - banjalo eliphezulu kakhulu futhi izinto ezinhle. Ukuze abalandeli babo bonke yemvelo - abasekeli fashion ohlanzekile kusukela iphuzu emvelweni umbono - ke zingenziwa amahembe elicolekileyo noma muslin.
Abanaso ukufihla lutho hhayi efudumele. nightgown Modern olandela Izinhloso ezahlukene kakhulu: ukusiza abesifazane ukuqonda futhi bathande emzimbeni wakho. Fashion amaqoqo abaklami abadumile kuvame zibhekiswe kubalandeli izitayela ezahlukene. Kulabo abakhetha zabuna, kukhona ngokuqinile usilika ebusuku shirts, black umbala, ehlotshiswe lace, nge neckline ezijulile nedolo yobude. Ladies abakwazisayo isitayela "yobuhlanga" futhi "Vamp", uzokubona amahembe enziwe kasilika izinhlekelele, ezemvelo nezenziwe yokufakelwa. Lezi gizmos kuvame ehlotshiswe mikhondo "okuzingela" futhi ahlukene Umbala elikhanyayo. Kodwa akubona abesifazane abakhululiwe, likhazimula sexy ngeke ahlale qakala emifushane (ngezansi nje ezinqeni) nge kasilika noma satin chemise nge neckline njengoba ejulile, contoured, isifuba esicinene futhi lwavutha ezansi.
Ngokukhethekile kule fashion amaqoqo izingubo ezinothonotho inikezwe umbala. Uma uke ayiswe amaphijama kanye nightgowns ukhethe elithambile, iyashintsha iyaphupha ibe imibala, kodwa manje base sithathelwe indawo shades of namanzi futhi ecebile. Abesifazane bakhetha a ukhilimu ukukhanya ne-lilac okhanyayo, pearl gray kanye pearl, cherry kanye ethokomele umbukwane luhlaza. Black futhi eyamukelekayo uma kuphela nightgown etinhlotjeni letibanti has a neckline sasivumela ezijulile, ngakho abangele isikhumba, ukuphaphatheka futhi olungenayo makeup ekuseni, bheka elidabukile ngaphezulu.
nightgown Modern akufanele sicashe manje njengoba into eyihlazo futhi bengafaneleki. Manje lezi zinto ayingxenye egcwele wezigqoko, izinto eyenzelwe ukugqamisa ubuhle besifazane, Ukwanelisa inkanuko futhi Ukuvusela. Lezi izingubo kufanele abe lutho - futhi yimuphi ummeleli wobulili besifazane (bengazi lutho ngokubukeka kwabo amaphutha) kungaba bazizwe bedingeka futhi bethandwa - ngisho noma kuyinto uqobo. Futhi ngaphandle kokuba othile ongathi engazizwa ezulwini lwesikhombisa injabulo, abe nomuzwa wokuthi isikhumba angenalutho wathinta le olubushelelezi abandayo kasilika, mncane gossamer lace esihle futhi efekethisiwe eduze sexy ezijulile-cut izimbali?
Chinos: kuyini? Kusukela sizogqokani ibhulukwe chinos?
Fashion ukuguqulwa. Kusukela yini okufanele uyigqoke? Dark Xoxa, omhlophe, ongaphakeme - izithombe imfashini bonke izikhathi
Nezingubo esilandelayo: intsha brand
14 ikhabethe izinto, okuyinto eyingozi empilweni yakho
Ivan-itiye ngesikhathi sokukhulelwa: izakhiwo ewusizo kanye contraindications
Kufika ukuthi mdala ukuncelisa ingane?
"Ugwadule Imbali" - incwadi kanye ifilimu of the gama elifanayo
Ukuthi ingane kufanele ukwazi engu-2
Ihhotela Volgograd - ayisekho inzuzo!